किन बन्द हुँदैछ मनकामना केबुलकार ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more किन बन्द हुँदैछ मनकामना केबुलकार ?
किन बन्द हुँदैछ मनकामना केबुलकार ?
पुस १३ गते, २०७७ - १०:३७
चितवन । मनकामना केबुलकार सेवा बन्द हुने भएको छ । नियमित मर्मतसम्भारका लागि सात दिन बन्द गरिने भएको हो । यही पुस १४ गतेदेखि पुस २० गतेसम्म बन्द गरिने मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए।
पुस १३ गते, २०७७ - १०:३७ मा प्रकाशित